Vokatry ny grevin’ny ladoany : orinasa maro hikatona, mpiasa anarivony ho very asa | NewsMada
Vokatry ny grevin’ny ladoany : orinasa maro hikatona, mpiasa anarivony ho very asa
Miandry ny fitondrana hamaha ny olana! Miantraika any amin’ny aim-pirenena indrindra ny ara-toekarena sy sosialy ny fihenjan’ny tady eo amin’ny fanjakana sy ny sendikan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana (Sempidou). Raha tsy misy ny vahaolana haingana avy any amin’ny fanjakana, hikatona ny orinasa anjatony, mpiasa anarivony ho very asa vokatr’izany.
Omaly, hentitra ny tenin’ny mpandraharaha tsy miankina, amin’ny voka-dratsy aterak’izao raharaha izao. Nambaran’ny filohan’ny Vondron’ny orinasa afakaba (GEFP), Charles Giblain, fa miankina amin’ny fanafarana akora sy ny fanondranana any ivelany ny fiharian’izy ireo. Mizaka ny sazy koa izy ireo raha tsy tonga ara-potoana ny entana aondrana, nefa tsy misy ny mpiara-miombon’antoka hamatsy vola hiantoka izany. Ho an’ny filohan’ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (Sim), Rajaonera Fredy, misy ny vola tokony ho an’ny fanjakana nefa tsy hiditra amin’izao raharaha izao. Tsy hisy fanondranan’entana rehefa tsy azo ny akora hamokarana avy any ivelany. Manaitra ny fanjakana izahay satria tandindomin-doza ny raharaha ara-toekarena eto amin’ny firenena, ankehitriny. Manan- danja amin’izany ny lafiny fanafarana sy fanondranana entana any ivelany, nefa tena ao anatin’ny kizo tanteraka izao. “Manodina ny orinasa izahay, koa aleo handray ny andraikiny ny fanjakana mba ahafahany miasa”, hoy ihany izy.
Mety hikatona afaka 8 andro ny orinasa Ambatovy
Iankinan’ny fanafarana entana, indrindra anisan’ny voalohany amin’ny fanondranana vokatra any ivelany ny tetikasa Ambatovy. Nambaran’ny filoha lefiny, Louis-Gosselin, tao anatin’izay herinandro nitokonan’ny mpiasan’ny ladoany izay, fa mahatratra 20-30 tapitrisa dolara ny vokatr’izy ireo tsy lafo tsy afaka naondrana any ivelany. Izany hoe, angatahana any amin’ny mpamatsy vola sy ny manana renivola ao amin’ny orinasa ny hanohizana handoavana ny karaman’ny mpiasa sy hihodinan’ny orinasa. Raha mitohy izao krizy izao, mety hikatona na hitsahatra noho ny lafiny teknika ny orinasa Ambatovy. Vokany, mpiasa anarivony no ho very asa. Tsy hanana antoka amin’Ambatovy koa ny mpanjifany any ivelany satria ho raisiny ho tsy matotra ny orinasa. Mahatratra 70 ny kaonteneranay misy akora fototra sy kojakoja ilaina amin’ny famokarana, mihitsoka any Toamasina sy eny amin’ny seranan’Ivato.
Tena ho ratsy ny toe-draharaha satria, manodidina ny 9.000 miliara Ar ny tentimbidin’ny fanafarana entana avy any ivelany ho very anjavony ary 7.000 miliara Ar ny fanondranana entana. Mahatratra 3 tapitrisa taonina kosa ny lanjan’ny entana hafarana avy any ivelany tsy afaka hiditra eto Madagasikara.